Doorashada KGS oo Arbacada dhacaysa iyo Roobow oo ay adag tahay inuu ka qeybgalo – Kalfadhi
Xubin ka tirsan Guddiga Doorashada Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS), Xildhibaan Aadan Wardheere, ayaa u sheegay Kalfadhi inaan Doorashada Madaxweynaha KGS dib looga dhigi doonin 19-ka bishan, oo ay maalin qura ka harsan tahay. “Fowdadii iyo qalalaasihii waa laga gudbay, dadweynuhuna waxay doonayaan in 19-ka bishaan ay doorashadu dhacdo” ayuu yiri Xildhibaan Wardheere.
Xildhibaanku waxa uu Kalfadhi u sheegay in sida kaliya ee uu Maamulka KGS u arko in looga gudbi karo xasaradaha siyaasadeed ee ka taagan Baydhaba ay tahay in doorashada laga gudbo, oo ay degdeg u dhacdo. Waxa uu sheegay in haba yaraatee uusan jirin go’aan la filaayo inuu dib u dhigo Doorashada Madaxweynaha KGS. Dalabka Xildhibaanno uu ka mid yahay Guddoomiyaha Golaha Shacabka, oo doonayey in doorashada dib loo dhigo, ayaa meeshaas ku fashilmay, sida uu xaqiijiyey Xildhibaanku.
Wardheere waxa uu ka hadlay sida ay Guddigu u arkaan in ay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ka xayirtay doorashada ay maamulayaan Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), oo ay shahaadadiisa siiyeen. “Musharrax Mukhtaar Roobow haddii uu yimaado Talaado ama Arbaco, oo la soo xaliyo, haddii uu diyaar yahay doorashada waa uu ka qeybgalaa, haddii ay dhici weysana ma aqaan sidey noqoneyso” ayuu yiri Xildhibaan Wardheere.
Waxay u muuqataa ineysan Doorashada Madaxweynaha KGS markale dib u dhici doonin, sababtoo ah saddex jeer oo hore ayey dib u soo dhacday. Dib u dhacyadaas hore ayaa culeys ka dhigi kara in dib markale loo go’aamiyo doorashada waqti kale, waana sababta uu Guddiga Doorashada KGS ugu adkeysanayo iney Golaha Wakiiladu 19-ka bishaan doortaan Madaxweynaha Maamulkooda. Taas waxay hoosta ka xariiqi kartaa inuu Mukhtaar Roobo seego ka qeyb-galka doorashadaas.
Qore: Fatxi Maxamed
Musharraxiintii ugu dambeysay oo maanta u qudbeeneysa Golaha Wakiillada KGS